Ciyaarihii ugu dambeeyay ee bilaashka ah ee Android - Sii deynta, Faallooyinka, Xeeladaha | Androidsis (Bogga 6)
Ciyaaraha Tennis ee ka dhanka ah zombies? Haa, Smashy Duo
Smashy Duo waa ciyaar tennis ah oo kooxaha ka soo horjeedaa ay yihiin zombies fara badan oo aan ku fureyno geesiyaasheena.
Ku sahaminta qoto dheer meerayaasha markabkaaga godka FRVR
Cave FRVR waa ciyaar bannaan oo aad ku qasbanaan kartid maraakiibta kala duwan ee aad leedahay si aad u sahamiso falanqaynta.
Ciyaaraha ugu wanaagsan Gameloft ee loogu talagalay Android
Kala soo bax xulashadan cayaaraha ugu wanaagsan ee Gameloft u sii daayay aaladaha Android ee aad kala soo bixi karto Play Store.
Nooca 'PUBG Mobile' 0.10 wuxuu imaan doonaa Diisambar 20 oo leh khariidadda cusub ee barafka 'Virkendi'
Maalin war buuxa leh dhammaan kuwa imaan doona nooca 0.10 ee PUBG Mobile waxaana ka mid ah ...
Fuula gidaarka fuulaya Rocky Climb caadi ah
Darbiyada toosan ee Rocky Climb ayaa ku sugaya sidaad u fuuleyso oo aad ula kacdo guul buur kasta oo aad la kulmi doonto.
Difaac saldhiggaaga zombie-ka ee badbaadinta guji 100 maalmood
100 maalmood waa ciyaar badbaado zombie ah taas oo aad ku hagaajinayso qalcadaha saldhiggaaga isla markaana aad kireysato saaxiibo cusub.
Xilliga 7-aad ee Fortnite wuxuu noo soo bandhigayaa sida ugu cusub uguna hal-abuurka badan
Xilliga 7 ayaa hadda laga heli karaa Fortnite, xilli cusub oo na siinaya tiro aad u tiro badan oo cusub oo ku saabsan aragtida iyo shaqeynta.
Istaraatijiyad weyn oo Aasiya ah oo RPG leh 'Grand Chase' oo caan ah
Grand Chase waxaa loo tarjumay Isbaanish waxayna u taagan tahay farsamadeeda farsamo ee heerarka oo dhan. Waxaad haysan doontaa RPG daqiiqado badan
Dodge dhammaan noocyada caqabadaha leh duulimaadka cakiran ee fiidmeerta Fumble Fang
Fumble Fang waa goob arcade ah oo ay tahay inaad u duusho si aad u sareeya si aad uga gudubto heerarka kaa horreeya ee bilaashka ah.
Amar & Guul: Rivals PVP, sheekada weyn ee RTS ayaa kusoo laabaneysa Android-kaaga
Command & Conquer: Rivals PVP waa ciyaar wanaagsan oo freemium ah, in kasta oo laga imanayo cida ay ka timid, waxay naga dhigeysaa xoogaa qabow. Waad ku raaxeysan doontaa shaki la'aan.
Ciyaaraha Epic waxay bilaabeen dukaankooda ciyaarta Android
Ka raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan Epic Games Store, dukaanka ciyaarta ee abuureyaasha Fortnite ee imanaya Android horaantii sanadka soo socda.
Sidee dagaalyahanada Pokémon GO uu u shaqeyn doonaa
Waxaan sharaxeynaa sida dagaalada udhaxeeya Pokémon GO ciyaartoydu u shaqeyn doonaan, kaas oo la awoodsiin doono dhamaadka bishaan Diseembar 2018.
Ha ka quusan dhibaatada dhibka weyn ee loo yaqaan 'Ghost Pop'!
Tooshka, halyeeyga 'Ghost Pop' waa inuu baabi'iyaa dhammaan cirfiidyada soo muuqan doona. Arcade ah toban.
Tallaabo ka kooban toban arcade, zombies iyo bisado Bisadda Guner
Haddii aad tahay taageere arcad wanaagsan, Bisadda Gunner waa mid aanad seegi karin si aad uga soo dejiso bilaash Google Play Store.
Kuwani waa barnaamijyada iyo ciyaaraha ugu fiican sanadka, sida laga soo xigtay Google
Google waxay abuurtay qiimeynta cayaaraha iyo codsiyada ugufiican sanadka 2018, ciyaaraha iyo codsiyada aan hoos kuusoo bandhigno.
Ka dhig burgers-kaaga kuwa ugu fiican xaafadda Burger Shop 2
Burger Shop 2 waa ciyaar loo yaqaan 'arcade game' kaas oo ay tahay inaad awood u yeelatid inaad abuurto ilaa 100 nooc oo kala duwan oo suxuun ah. Ciyaar bilaash ah oo ka socota Google Play Store.
Soo hel mechs cusub, iyaga cusbooneysiiya oo u qaado dagaalka PvP ee ka dhanka ah 4 ciyaartoy ee Mech Battle
Mech Battle xaqiiqdii waa sharadka ugufiican ciyaarta dagaalka mech ee hadda laga heli karo Google Play Store.
Jidka 4aad: Baxsadka Qadiimiga ah waa qol lagu baxsado oo leh muuqaal qurux badan
Waa inaad ogaataa runta hore ee Faraway 4: Baxsiga Qadiimiga ah, qolka baxsashada oo leh jawi habeysan.
Kaabayaasha, fisigiska sheyga iyo nalalka neon ee Spectrum Break
Spectrum Break wuxuu ku guuleystaa waayo-aragnimo cayaareed weyn oo leh barnaamijyada ka socda cagteenna iyada oo ay ugu wacan tahay walxaha fiisikada.
Pokémon GO: dagaalada u dhexeeya tababarayaashu aad ayey isugu dhow yihiin
Dhowr saacadood ka hor waxaan idiinka sheekeynay Maalinta Bulshada ee Pokémon GO, dhacdo socon doonta illaa ...
Ka fogow daraasiin gantaal oo aad ku leedahay rook Dodge
Rocket Dodge waa ciyaar ay tahay inaad ka fogaato gantaallo badan oo isku dayi doona inay ku dhacaan goobtaada.
Pokémon GO, waa sida ay u shaqeyso Maalinta Bulshada
Pokémon GO waa la cusbooneysiiyey Maalinta Bulshada oo na siineysa suurtagalnimada in lagu ugaarsado tiro badan oo cusub oo Pokémon ah oo lagu daro Pokédex.
Balwadda ay soo saarto Fortnite waa "sida ay u xoog badan tahay daroogada"
Balwadda ay sababtay ciyaarta Epic Games, Fortnite, waa mid aad u weyn oo inbadan sheeganeysa inay la mid tahay ta daroogada ay keento.
Tilmaamo waxtar leh oo lagu raaxeysto Shin Megami Tensei Liberation Dx2
Maalmo ka hor waxaan kugu wargalinay bilaabida Shin Megami Tensei Liberation Dx2, oo ah ciyaar RPG ku saleysan ...
Si taxaddar leh uga fikir mid kasta oo ka mid ah tillaabooyinka aad ku leedahay Steps & Dragons
Talaabooyinka & Jiidooyinka waa halxiraale-mowduuc mawduuc leh oo aan ku fakareyno dhammaan tillaabooyinka ay tahay inaan qaadno si aan ugu guuleysano qofka naga soo horjeeda.
Qaybi qaybaha ugu yar si aad u dhammaystirto heerarka ku jira xujo-u-dhigashada Isku-aadka
Slide Match waa mid ka mid ah xujooyinka halista ah ee u janjeera in lagu xiro waxaana lagu gartaa asal ahaan. In kastoo aysan ahayn markii ugu horreysay ee aan aragno mid sidan oo kale ah.
Waqtiga ciyaarta dhallin-yarada Shiinaha ayaa kala bar laga jaray Sharafta Boqortooyada, ayay tiri Tencent
Ciyaaraha Tencent waxay dhameystireen bilaabista Shiinaha ee xaqiijinta magaca dhabta ah ee mid ka mid ah cayaaraha ugu caansan, Honor of Kings, Nofeembar 19.
Space Wingmen waa dilaa marsiiya oo leh makaanik toogasho gaar ah
Haddii aad taageere u tahay nooca martida, ma dhaafi kartid Space Wingmen iyo muuqaalkeeda farsamo ee muujinta iftiinka oo dhan.
Isku biir 'Mon', halxiraalaha caajiska ah ee 'RPG' kaas oo aad ku qasbeyso inaad isku darsato wuxuush aad u abuurto awood badan
Merge Mon waxaa loogu talagalay kuwa jecel xujooyinka, RPG-yada iyo daawashada ciidankooda waxashnimada ah ee weerara cadowga si aan kala go 'lahayn.
Samurai Kazuya, oo ah samurai RPG gujiyaha iyo qaab muuqaal weyn
Samurai Kazuya waa ciyaar gujis RPG ah oo aad awood u yeelan doonto inaad abuurto seefahaaga si aad u garaacdo dhammaan cadaawayaashaas ka soo bixi doona meel kasta.
Crush the Castle waa ciyaar xujo aad u wanaagsan oo la qabtay fiisigis shey aad u wanaagsan. Waxaan ku ogaan doonnaa tan burburinta qalcadaha.
Gawaarida waalan ee Rev Heads Rally tartanka arcade
Rev Heads Rally waa ciyaar weyn oo lagu tartamo arcade taas oo ah inaad ka takhalusto qofka kaa soo horjeeda si aad ugu guuleysato guusha ugu dambeysa.
Iibinta Jimcaha Madow sidoo kale waxay ku dhacday Google Play Store oo waa la heli karaa ilaa Cyber ​​Monday
Jimcaha Madow ayaa sidoo kale soo gaadhay Play Store, halkaas oo aan ku haysanno qiimo dhimis fara badan iyo ciyaaraha ugu caansan xilligan.
Stack Hit, ama marka wax iska caadi ah dhib ka dhinto
Stack Hit waa dhaawac kale oo badanaa yimaada isagoo dhar culus qaba. Halkaan iskuma dhihi karno isku mid mana ku heshiinayno sida ay u fududahay.
Sida loo qariyo tirooyinkaaga ciyaaraha PUBG Mobile
Maaddaama PUBG Mobile uu sii kordhayo, waxaan ku tusineynaa sida loo qariyo tirakoobka ciyaarta dagaalkan weyn ee royale.
Shin Megami Tensei: Xoreynta Dx2: Ciyaarta Cusub ee SEGA ayaa imaaneysa Android
Raadi wax badan oo ku saabsan Shin Megami Tensei Liberation Dx2, ciyaarta cusub ee SEGA ee aan hadda si rasmi ah ugu soo dejisan karno Android.
Aargoosiga Boqortooyada Rush Hadda Waa La Heli Karaa: Mid ka mid ah Soocelintii ugu Badnayd ee Difaaca Tower
Difaaca munaarad badan oo ka socota mid ka mid ah istuudiyaha ciyaarta fiidiyowga ee ugu caansan ee ku saabsan moobiilka. Waxaad horeyba u laheyd Boqortooyada Rush aargoosi.
Kacdoonka Caqiidada ee Assassins waa inaad ku hogaamisaa walaaltinimadaada guul ka soo horjeedka Templars
Ubisoft wuxuu Keena Kacdoonka Caqiidada ee Google Play Store si aad u abuuri karto walaaltinimadaada, aad u maamuli karto xaruntooda oo aad dhex geli karto.
Monument Valley 2 iyo Motosport Manager 3 oo ah € 0,90 iib ah
Muddo 7 maalmood ah, labadaba Monument Valley 2 iyo Motosport Manager 3 waxaa laga iibsan karaa Google Play Store. 2 kulan aad u fiican.
Multiplayer qofkii ugu horreeyay ee toogta wanaagga Heroes of Warland
Haddii kuwa wax tooganaya ay yihiin waxaaga, oo aad la yeelan doonto Halyeeyada Warland wax badan oo ciyaarta ka horreeya waxaad la ciyaari doontaa 4 ciyaartoy oo kale.
Fortnite wuxuu soo bandhigayaa habka ciyaarta cusub 'Wild West', oo la yimaada astaamo badan oo cusub, hub iyo obtehos in la isticmaalo. Waxaan kuu sheegeynaa faahfaahinta!
PUBG Mobile ayaa loo cusbooneysiiyay 0.9.5 iyadoo la adeegsanayo qaab cusub oo 100-ciyaartoy ah oo adag iyo inbadan
Xilliga PUBG Mobile 4 wuxuu imaanayaa berrito, laakiin hadda waad ku raaxeysan kartaa qaabka cusub ee adag ee cusbooneysiinta PUBG Mobile.
Talaabo talaabo ah Pies Ligeros, oo ah casriyeynta cusub ee ka socota Noodlecake
Haddii aad raadineyso waayo-aragnimo aad u kala duwan oo ku saabsan moobilkaaga, tan waxaa bixiya Pies Ligeros, oo ah ciyaar Noodlecake ah oo loogu talagalay Android-kaaga oo aad bilaash ku haysato.
PUBG Mobile wuxuu ku guuleystey Golden Joystick 2018 oo ah Ciyaarta ugu Fiican Mobilada ee Sanadka
PUBG Mobile wuxuu ku guuleystey Abaalmarinta Dahabka ah ee loogu talagalay Ciyaarta ugu Wanaagsan ee Mobile 2018 ee ka dhanka ah tartankiisa ugu weyn, Fortnite. Abaal marinta ciyaar aad u weyn.
Meel iska dhig jahwareerkaaga maalinlaha ah ee leh Harmony, xujo ah qoraallada muusikada
Haddii aad raadineyso ciyaar Zen ah oo aad ku raaxeysato maalinba maalinta ka dambaysa, tani waa is-waafajin. Xujo muusiko ah oo leh muuqaal muuqaal aad u qurux badan.
Stack & Crack waa xujo aad ku qasban tahay inaad isku ururiso qaybo qaar si aad kuwa kale u qaadato
Stack & Crack waa inaan isugu geynaa qaybo qaar dusha sare kuwa kale si aan ugu wareejinno miiska ciyaarta una dhammaynno heerka. Qaab muuqaal ah oo weyn.
Sidee looga hortagaa codsi ama ciyaar inay ogaadaan meesha aan ku suganahay
Curyaaminta marin u helka goobta barnaamijyada aan ku rakibnay kombiyuutarkayagu waa hawl aad u fudud oo aan kugu soo bandhigno maqaalkan.
Red Siren: Difaaca Hawada, ama maxaa noqon lahaa isbeddelka Difaaca mala-awaalka ee 80-maadkii
Iyada oo dhinac loo rogayo, Red Siren waa biqil 'em kor u taagan oo u taagan naqshadeynta iyo jawiga mustaqbalka ee mudan in la arko.
Bunnymare: Circus Baxsadku waa ciyaar ku habboon Lemmings
Bunnymare waa ciyaar gebi ahaanba dhiirrigelisay Lemmings, inkasta oo ay siinayso taabashadeeda si ay noogu qaadato adduunka wareegga.
Minecraft for Android waxay noo ogolaaneysaa inaan isku dayno ciyaarta bilaash
Nooca bilaashka ah iyo tijaabada ah ee 'Mincecraft' ayaa hadda laga heli karaa Google Play Store, ciyaar aan isku dayi karno si bilaash ah ka hor intaanan tijaabin.
Qarax nuur fudud oo shaashaddaada mobilada leh Difaaca Hawada Aan Joogsi Lahayn
Muraayad ka dhex mari doonta shaashadda mobilkaaga ciyaartan oo la yiraahdo Difaaca Booska Aan Joogsiga Lahayn. Toogasho dheer 'em up.
[APK] Sida loogu ciyaaro Minecraft bilaash
Haddii aad rabto inaad si bilaash ah uga ciyaarto Minecraft mobilkaaga oo aad ku raaxeysato adduunyada ciyaartan weyn, sida adduunkeeda biyaha, ha ku raagin inaad na akhrido.
Ha uga tagin zombie taagan Don Zombie
Don Zombi waa ciyaar zombie ah oo aan ku qasbannahay inaan ka taxaddarno inaanan ka tagno wax zombie ah oo taagan. Feejignaanta muuqaalka muuqaalkeeda.
[APK] Hadda soo dejiso beta 0.9.5 ee PUBG Mobile oo bilaabmi doona xilli ciyaareedka cusub
Xilli ciyaareedka cusubi hadda wuu dhow yahay oo Tencent Games ayaa kuu diyaarinaya inaad ku raaxaysato beta cusub oo 0.9.5 ah oo aad heli karto.
Ku afuufo boqolaal baloogyada Bangiyada
Bang The Blocks ayaa kaa dhigaya ka hor inta uusan qarxin dhismayaal fara badan oo isku dayi doona inay kaa qaadaan qaar ka mid ah 3-da qalbi ee aad nolosha ku leedahay.
Sida loo helo ciyaaraha degdega ah ee ugu wanaagsan Android
Soo ogow sida loogu helo ciyaaraha degdega ah adoo si fudud u isticmaalaya Ciyaaraha Cayaaraha ee taleefankaaga Android sidaasna ku yeela kulankaan.
Kubbadda Dabka ee 3D waxay tusaale u tahay quruxda iyo balwadda ay lebbiska caadiga ahi ku kiciyaan
Kubadaha Dabka ee 3D ayaa halkaan u jooga inuu waqti dheer la joogo gameplay-kiisa balwada leh iyo heshiis weyn oo ku saabsan muuqaalada. Indho qabasho shaki la’aan.
Kuwani waa ciyaaraha iyo codsiyada loo magacaabay Google Play Best ee Abaalmarinta 2018
Soo ogow 20-ka kulan iyo 20-codsi oo loo magacaabay Abaalmarinta Google ee ugu Wanaagsan ee Abaalmarinta 2018 oo loo kicin karo sidii guuleysteyaal.
Gawaarida 'Crazy Dino Park' waa inaad ku maareeysaa jarista madadaalada dinosaur
Park Crazy Dino wuxuu ku hor dhigayaa maareynta jardiinada mawduucyada, adigoon ilaawin qodidda lafaha xayawaan qiroweyn u ah ciyaar kale.
Qaar ka mid ah meelaha ugu caansan ee PUBG Mobile waxaa dhiirrigeliya Chernobyl
Qaar ka mid ah goobaha ugu caansan ee ku yaal khariidadda PUBG Mobile Erangel waxaa lagu raadiyaa sida laga soo xigtay geedka xudunta u ah Chernobyl.
Difaac saldhiggaaga gumaadka zombies ee Magaalada Badbaadada
Magaalada Badbaadada waa ciyaar dhisme aasaasi ah oo leh dhibco gaar ah. Ka difaac saldhigga weerarka zombie.
Barxada 'Spoorky platform' waa wax lala yaabo: abuur heerarkaaga oo la ciyaar kuwa kuwa kale
Haddii aad raadineyso websaydh weyn, kani waa Spoorky. Waxayna leedahay waxbadan oo leh tifaftire heer ah kuwa kale inay ciyaaraan oo ay ku raaxaystaan.
Rinjiyeynta waxaa lagu sheegay Rinjiga Hit-ka aan caadiga ahayn
Rinjiga Rinjiga wuxuu ku siinayaa inaad buraashka gacanta ku qaadatid oo aad rinjiyeeysid tuubooyin badan si tayo leh oo raaxo leh oo aan caadi aheyn.
Knights & Dungeons waa ficil RPG a la Diablo oo leh heerar ballaaran iyo waxyaabo badan oo la sameeyo
Knights & Dungeons waa ficil RPG ah oo kuwa aan jecel nahay inaan nafteena ku lumino saacado, tirtirno boqolaal cadaw ah oo aan soo aruurino bililiqada la qadariyo.
Ochontera sharraxaadda 'GlowGrid 2', oo xujo ah oo ay dhiirrigelisay Tetris
GlowGrid 2 waa ciyaar xujo ah oo aan ku qasban nahay in aan isku darsano qaybaha Tetris ee sabuuradda oo aad uga duwan mid ka mid ah cayaaraha ugu sheekooyinka badan.
[APK] Waxaad hadda kala soo bixi kartaa Heroes-ka SEGA-ga Android barnaamijka 'Sonic' iyo kuwa kaloo badan
Halyeeyada SEGA waa ciyaar laga sameeyay xoq shirkad caan ah. At the Candy Crush Saga wuxuu ku yimaadaa kulankaan cusub ujeedooyin badan.
Dib-u-eegis RPG ah oo loo yaqaan Xisaabta iyo Sixirka taas oo aad markale ku baran doontid hawlgallada xisaabta sida isugeynta, kalagoynta ...
Ka caawi Cas inuu dib ugu soo celiyo meeraha uu jecel yahay Orbitus ee halyeeyada kiciya
Ka caawi Red iyo saaxiibbadiis inay xoreeyaan meeraha Orbitus ciyaar qabow oo loo yaqaan 'Trigger Heroes'. Bilaash Google Play Store.
Markan seef baa la garaacaysa Gaajada Battle, midda cusub ee abuureyaasha Zombie Age
Haddii aad ciyaareysay Zombie Age 2, waxaad la kulmi doontaa wax badan oo isku mid ah, laakiin waqtiyadii dhexe ee seefo badan, orkooyin, iyo in ka badan Gaajada Battle.
La dagaallama feedhkaaga iyo laadadka ka dhanka ah ciyaartoyda kale waqtiga dhabta ah ee Rumble Arena
Rumble Arena waxaa dhiirrigeliya Nintendo Super Smash Bro weyn si ay u keento dagaalka noocaas ah ee casrigaaga Android.
Ku rida sanduuqyada waqtiga saxda ah ee Swing!
Swing! Waa wax iska caadi ah oo rimidda fudud, laakiin leh dhib yar oo ku filan in la qabsado oo la isku dayo in sanduuqyadaas si fiican loo rido.
Nacnac badan oo ka yimid King oo leh Candy Crush Friends Saga
King wuxuu keensanayaa cinwaan kale oo cusub kaas oo lagu darayo boqolaal kun oo nacnac leh Candy Crush Friends Saga. Dhamaan taageerayaasha.
Blizzard wuxuu ku dhawaaqay Immortal Diablo, oo ku soo degay taleefannada gacanta mid ka mid ah sagas-yada ugu caansan
Blizzard ayaa la filayay inuu ku dego aaladaha mobilada iyadoo ciyaar laga sameeyay meel hoose. Ibliis aan dhimanayn ayaa soo socda. Hada kahor isdiiwaangali.
Boqorka su'aalaha wuxuu la soo noqdaa Weydiinta 2
Weydiisay 2 waxay laabanaysaa su'aalo badan iyo dayactir weyn oo qaabka garaafka ah si ay ula socoto naqshadaha barnaamijyada iyo ciyaaraha.
Ku duub cirka Dagaalkii Labaad ee Adduunka diyaaraddaada oo leh Pilot Air Combat: WW2 Pacific
Duuliyaha La Dagaalanka Hawada: WW2 Pacific wuxuu kuu dhigayaa inaad maamusho diyaarad dhan oo loogu talagalay dagaalkii cirka ee Dagaalkii Labaad ee Adduunka ee aad ku hayso Android.
Google Play Best Of 2018 Awards: Marka waxaad u codeyn kartaa ciyaarta aad ugu jeceshahay
Raadi sida aad ugu codeyn karto ciyaarta aad ugu jeceshahay Google Play Best Of 2018 Awards. Codeynta laga bilaabo Nofeembar 12.
Ku tartan tartamada-waqtiga dhabta ah ee ciyaartoyga badan ee Golf Battle
Golf Battle waa ciyaar ciyaartoy badan oo aad wajihi doonto kuwa kale kulamada waqtiga dhabta ah. Waxay leedahay dhowr habab iyo waxyaabo badan.
Flippy Skate waa casaan ka cusub Ketchapp Games si loogu cuno jiffy
Si dhakhso leh u socda, Flippy Skate waa mid cusub oo ka socda Ciyaaraha Ketchapp, istudiyaha mas'uulka ka ah aqlabiyadda waxyaabaha caadiga ah ee aan ku haysanno Android
Qaad hawada sare ee hawada 'Ava Airbone hang glider'
Waxay noqon doontaa tareenkaaga lugaha laalaado iyo caawinta Ava ee Ava Airbone inaad kici doontid cirka si uu kaaga caawiyo dabaysha oo aad u gaarto masaafada ugu badan.
Tani waa sida hadiyaduhu uga shaqeyn doonaan Fortnite
Fiidiyow cusub ayaa muujinaya sida hadiyaduhu uga shaqeyn doonaan Fortnite, taas oo noo oggolaan doonta inaan u dirno walxaha iyo maqaarka saaxiibbadeen.
Ku soo uruurinta codsiyada ugu fiican iyo cayaaraha aad awoodi doontid inaad ku raaxeysatid habeenkan Halloween si aad ugu raaxeysato kaligaa ama shirkad.
Quraafaadkii MMORPG RuneScape ayaa hadda laga heli karaa Android
MMORPG weyn ayaa dambaska uga soo laabanaya si toos ah qalabkaaga Android: RuneScape. Si bilaash ah ula ciyaar bulshadaada.
Taliska RTS & Guul: Halgamayaasha Halyeeyga Imaanaya Diseembar 4
Command & Conquer: xafiiltamayaasha ayaa imaan doona bisha Diseembar 4 iyada oo leh nooca freemium ee la filayo in ay si wanaagsan u fuliyaan Farsamada elektarooniga ah.
Sidee Loo Ciyaaraa Ciyaarta Ciyaaraha Badan ee Google ee loogu talagalay Halloween
Waxaa loo heli karaa dhammaan aaladaha laga yaabo inay leeyihiin shabakad internet si ay u bilaabaan ciyaarta multiplayer ee Google ee loogu talagalay Halloween.
Ka tirtir Hooyooyinka Hooyo iyo guutadiisa halyeeyga ee Retro Turn Undead 2
U diyaari kumanaan saamiyaal ah si aad u baabi'iso ciidanka hooyada ee King's mugdiga madadaalo iyo raaxo ku noqo Undead 2 oo ka socota Nitrome.
Ciyaaraha zombie ee ugufiican ee lagu raaxeysto Halloween this 2018
Ku soo uruurinta cayaaraha ugu fiican ee zombie-ka ah ee aad ku raaxeysan doonto Halloween-kan 2018 si aad uhesho habeen aad u xiiso badan oo argagixiso
Diyaar u noqo inaad ku sawirto qaababka joomatari shaashadda leh tilmaamaha Swipe Magic. Ciyaar aad u walaac badan bilowgii.
Fling Fighters waxay bixisaa dagaal dabacsan iyo soo bandhigida mashruucyo ka dhan ah ciyaartoy kale
Dagaalyahannada Fling waxay soo jeedinayaan ciyaaro badan oo ciyaartoy badan leh oo ka dhan ah ciyaartoy kale iyo ka soo horjeedka sirdoonka macmalka iyadoo la soo bandhigayo mashruucyo
Xoog dhalaalaya, soo noqoshada hiddaha iyo sida aan loo sameyn
SEGA waxay sii wadaa inay sameyso dekedo aad uxun oo kamid ah kulamada caadiga ah ee nolosha. Xoogga Iftiiminta ah lama yaabin oo wuxuu mar kale ku dhaqmaa dhaqan xumo.
Ciyaarta Badbaadada, Xiaomi kulankeeda cusub ee qaabka PUBG Mobile iyo Fortnite
Maxaa ka cusub Xiaomi: Badbaadinta Ciyaarta, ciyaar u timaadda inay wajahdo PUBG iyo Fortnite oo ay siiso shirkadda Shiinaha muuqaal cusub.
Lahasho xeebta cidiyahaaga weyn ee King of Crabs
Qalabyo badan iyo dagaalyahanno badan ayaa kugu sugaya ciyaar tayo leh: King of Crabs. At .io wuxuu la yimaadaa kulankaan wax badan oo 3D ah.
Baakad cusub oo gaar ah oo loo yaqaan 'Fortnite pack' ayaa timaadda Samsung Galaxy
Samsung ayaa dhawaan ku dhawaaqday boggeeda rasmiga ah in xirmo cusub oo Fortnite ah ay imaan doonaan goor dhow si gaar ah qalabkeeda Samsung Galaxy.
Sida Loo Ciyaarayo Magaalada Salem: Ciyaar Shaki, Dil iyo Been
Haddii aad rabto inaad ogaato sida loo ciyaaro Town of Salem, waxaan soo bandhigeynaa tusahan oo ah qeybta koowaad ee taxane kale oo maqaallo horumarsan leh.
PUBG Mobile wuxuu u labbisan yahay Halloween oo wata nooca 0.8.0 oo ay ku rakiban yihiin astaamo badan oo cusub
Habka habeenka, suurtagalnimada in lala ciyaaro dadka ku hadla isla luuqadda ama maqaarka kala duwan ee habeenka Halloween ee PUBG Mobile.
Khatartu waxay kugu dhejin doontaa godadka qoto dheer ee 4Tirmooyinka
4 tiirarka waxay leeyihiin ujeedo aad ufiican oo inyar uun lagu hagaajiyo geesaha qallafsan ee ciyaarta, waxay noqon doontaa suurtogal in la helo ciyaar awood u leh kaqeybgal
PAKO Weligeedba waxay kuu keeneysaa waxa ugu fiican ee taxanaha qasacadaysan ee iska caadi ah
Haddii aad jeceshahay filimada cayrinta booliska, PAKO Forever waa mid caadi ah oo ku dhacda barta si loogu qaado mobilkaaga.
Ciyaaraha ugu cabsida badan ee Halloween-kan 2018
Taxane taxane ah oo cabsi badan oo ku saabsan ciyaaraha Halloween 2018 si ay kaaga nixiyaan inaad dhimato ama aadan fahmin sida cabsida nafsiyeed ay ugu jiri karto sidan oo kale
Ma ciyaari karo Fortnite ee Android? Isku day Battlelands Royale
Haddii taleefankaaga gacanta uusan si habboon u dhaqaajin karin Fortnite ee loogu talagalay Android, waxaan haysannaa beddelka ugu fiican ee suurtogalka ah: Battlelands Royale.
Si aan xad lahayn iyo wixii ka dambeeya loo yaqaan 'Cosmobot arcade'
Haddii aad jeceshahay arcades iyo mawduucyada bannaan, waxaad nasiib u leedahay Cosmobot, ciyaar bilaash ah oo Isbaanish ah oo tayo sare leh.
Golfmasters waa ciyaarta golf-ka xayawaanka ugu badan ee aad ku tuuri karto wejigaaga
Golfmasters waa ciyaar golf xiiso leh oo leh dareen arcade ah. Waxaad ka heli doontaa xayawaan badan oo ka mid ah savannah si aad u sameyso lammaanaha ugu fiican.
Ku noqo hawl wade Crane ee Qodid: Ciyaar Qodis
Dhexgal: Ciyaar Qodista (Excavator Game) waa ciyaar xiiso leh oo xoogaa jilid ah. Waa inaad noqotaa xirfad yaqaan qodista qodista.
Mudane Juggler wuxuu kuu soo jeedinayaa inaad noqoto jug kubbadaha noocyadeeda kala duwan leh
Mudane Juggler waa ciyaar aan caadi aheyn oo ay tahay inaad ogaato sida aad naftaada ula macaamilayso sida juggler oo kale oo loogu talagalay circus. Ciyaar tayo wanaagsan oo bilaash ah.
Tuhun, dil iyo difaac kuwa aad jeceshahay ee Magaalada Salem, oo ah mid ka mid ah ciyaaraha sanadka
Magaalada Salem waa ciyaar toban ah oo aad u baahan tahay inaad si buuxda uga qayb gasho shirqoolada magaalada si aad u ogaato qofka sharka lihi iyo kan wanaagsan.
Piffle iyo kittens-keeda ayaa halkaan ka jooga abuurayaasha Waddada Crossy
Markan waxaan ku badaleynaa digaaga xoogaa yar yar oo qurux badan oo naga caawin doona inaan ka gudubno daraasiin heerar ah Piffle. Ciyaar weyn guud ahaan.
Google Play hadda wuxuu kuu ogolaanayaa inaad tijaabiso sii deynta soo socota iyo ciyaaraha la bixiyo
Google Play horeyba wuxuu kuu ogolaanayaa inaad tijaabiso ciyaaro lacag leh. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan muuqaalka cusub ee lagu soo bandhigay dukaanka barnaamijka.
Xukunka: Game of Thrones on Android: waxay la wareegaan toddobada Boqortooyo halka xilli ciyaareedkii ugu dambeeyay yimid
Xukunka: Game of Thrones ayaa kuu oggolaan doona inaad go'aansato mustaqbalka Toddoba Boqortooyo adoo ku sawiraya Daennerys de la Tormenta, Jon Snow iyo kuwa kale oo badan.
100 + isbeddelada cusub iyo cusbooneysiinta ku soo socota PUBG Mobile ee Halloween
U diyaar garowga Halloween ee PUBG Mobile. Waxaan haynaa liiska 100 isbedel iyo warar Isbaanish ah si aad u ogaato isbeddelada.
PUBG Mobile wuxuu dhaafayaa 100 milyan oo rakib ah Google Play Store
Lama tirin karo waxyaabaha soo socda ee ay ku leedahay Shiinaha, PUBG Mobile waxay maamushaa inay ku dhaafto 100 milyan oo rakib ah Google Play Store.
Sida loo ogaado dhammaan barnaamijyada iyo ciyaaraha aad ka iibsatay Google Play Store
Barnaamijyada la Iibsaday waa barnaamij kuu oggolaanaya inaad ogaato barnaamijyadooda iyo cayaaraha aad iibsatay. Barnaamij bilaash ah oo xitaa kuu sheegaya dhammaan lacagtii ku baxday.
Ciyaaraha ugu wanaagsan ee baaritaanka loogu talagalay Android
Afarta kulan ee ugu wanaagsan ee baaritaanka loogu talagalay Android. Soo ogow xulitaankan cayaaraha baare ee laga heli karo Play Store.
Jeff van Dyck ayaa mas'uul ka ah heesta asalka ah ee Skyward Journey, ciyaar aad rabto inaad ku nasato wax kale.
Seefta xeeladeedu waxay la dagaallameysaa a 'Dil Bill' xilligii ugu fiicnaa Da'da Da'da Samurais
Mid ka mid ah ciyaaraha ugu fiican sanadka ee loogu talagalay Android waa Da'da Da'da Samurais. Farsamo ahaan shaqada la qabtay waa mid aad u fiican.
FIFA 19 beta ayaa hadda loo heli karaa Android
FIFA 19 ayaa loo heli karaa Android qaab beta ah. Soo ogow beta-ka ciyaarta kubbadda cagta ee muddada dheer la sugayay ee aad hadda ku soo dejisan karto taleefankaaga.
Hadda waa suurtagal in la soo dejiyo Fortnite casuumaad la'aan
Fortnite for Android hadda waa la heli karaa iyada oo aan lagu casuumin. Raadi wax badan oo ku saabsan bilaabida APK ee ciyaarta adigoon helin martiqaad.
Ku quus Zombie Rollerz pinball RPG quudhin
Zombie Rollerz waa ciyaar bilaash ah oo aad u adeegsan doonto fiisigiska walxaha si aad uga tirtirto dhammaan zombiesyada guddiga.
Badland Brawl waxay bixisaa waxyaabo farabadan oo fisigis ah iyo isku dhacyo sida Clash Royale
Badland Brawl waa ciyaar siineysa murugo u gaar ah wax walba oo ahaa Clash Royale. Waxay u taagan tahay fiisikiska walxaha dagaalka.
Ka caawi Molli Pop ka hortagga kooxo badan oo cirfiidyo ah oo ku jira meertada dambe ee nacladaha nacnaca
Habaarka nacnacyada 'nacaladu waa farsamo-yaqaan sifiican loo daryeelo oo dib-u-habeyn ah oo ku qarqi doona shaashaddaada mobilada farshaxanno badan oo pixel iyo rooxaanno leh.
Amiirkii Beershiya: Baxsashadu waa soo noqoshada halyeeyga oo ka yimid gacmaha Cayaaraha Ketchapp
Waxaa laga abuuray meel hoose si loogu sharfo Amiirkii ugu horreeyay ee Beershiya "Baxsadka". Ma awoodi doontaa inay dib noogu celiso waqtiyadii tagay? Soo ogow.
Phantomgate: The Last Valkyrie waa iskudhaf barnaamij, RPG iyo dagaal salka ku haya
Haddii aad rabto noocyo kala duwan iyo qaababka ciyaarta, Phantomgate: The Last Valkyrie waa adiga. Asal ahaan qaabkeeda.
Ciyaaraha zombie ee ugu wanaagsan Android
Afarta kulan ee ugu fiican zombie-ka ee Android. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan cayaaraha zombie ee laga heli karo Play Store.
U dhis gurigaaga geedkaaga Lincoln iyo asxaabtiisa Nickelodeon's Crazy House
Wax ka baro xiisaha Lincoln, asxaabtiisa iyo gabdhihiisa. Waxaad awoodi doontaa inaad dhisto, dhammaystirto hawlo badan, aad iibsato walxaha oo aad barato sheekooyinkooda.
Super Cat Tales waa sheeko wanaagsan oo dib u habeyn ah
Si bilaash ah ugu soo dejiso si aad ugu raaxeysato barxad leh qaab muuqaal ah oo aad u wanaagsan oo kugu qaadi doonta waxyaabo badan oo bisadaha xiise leh
Ciyaaraha Android iyo codsiyada loogu dabaaldego Halloween
5 ciyaaraha Android iyo codsiyada si loogu dabaaldego Halloween. Soo ogow ciyaartan cabsida badan leh iyo barnaamijyada taleefankaaga Android horeyba loo heli jiray.
Ku guuleysta xaafaddaada ama magaaladaada Run An Empire ka hor inta aysan dadka kale sameyn
Orod Boqortooyadu waxay kaa dhigeysaa ka hor intaan adduunka oo dhan la qaadin, markasta oo aad lug ku dhex marto ama aad ordo. Ciyaar indho qabad leh oo loogu talagalay raacitaanka Pokémon GO.
Tencent si ay u dalbato aqoonsiga wajiga ee Honor of Kings ee Shiinaha ka dib markii si xun u qabatimay ciyaaraha fiidiyowga
Shirkadda Shiinaha ah ee loo yaqaan 'Tencet', ayaa codsan doonta aqoonsiga wajiga ee 'Honor of Kings' ee Shiinaha, ka dib balwadda daran ee ciyaaraha fiidiyoowga ah ee waddanku ku dhibaatoodo.
Jeebka Jeebka ayaa u yimid kuwa nostalgic u ah toogashada martida wanaagsan. Ciyaar si xor ah looga heli karo Google Play Store.
PAC-MAN: Ralph wuxuu jebiyaa Maze waa nooca loo yaqaan 'remastered of a video game icon'
PAC-MAN: Ralph wuxuu jabiyaa Maze wuxuu noo keenayaa Ralph iyo Felix si aan ugu raaxeysanno sida dadyowgu u dilaan cirfiidyada ugana baxsadaan iyaga.
TheAwards: Abaalmarinta cayaaraha ugu fiican iyo codsiyada Spain gudaha 2018
TheAwards: Abaalmarinta cayaaraha ugu fiican iyo barnaamijyada moobiilka ee Isbaanishka sanadka 2018. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan xafladdan abaalmarinta loogu talagalay cayaaraha moobiilka iyo codsiyada
Ka caawi asxaabtaada inay baxsadaan adoo sawiraya xariiqyo ku yaal 'Pixel Escape'
Ka baxsashada Pixel waa ciyaar iska caadi ah oo fudud oo aad ku sawirayso aagagga ay asxaabtaada xiisaha badani ka gudbi doonaan
Mashruuca Stream: Adeegga qulqulka ciyaarta Google ayaa hadda rasmi ah
Mashruuca Stream: Adeegga qulqulka ciyaarta ee Google durba waa dhab. Raadi wax badan oo ku saabsan mashruuca cusub ee shirkadda oo si rasmi ah loo soo bandhigay.
Dambiil dhammaan walxaha noocyada ah Maalinta Qashinka, ama Maalinta Qashinka
Dambiil dhammaan noocyada walxaha caadiga ah ee GarbageDay, ciyaar fudud, laakiin leh muuqaal muuqaal aad u la yaab leh markii la sawirayo silhouettes.
Ku noqo tuug xirfad leh Hooky Crook arcade
Hooky Crook waa ciyaar sifiican loo qabtay ciyaarta loo yaqaan 'Arcade game' oo u taagan dabeecaddeeda iyo rabitaanka xatooyada.
Animus Harbinger, seeftaada ka dhanka ah guutooyinka shaydaanka ee dagaalka dhow
Harbinger waa ciyaar seef weyn oo seef la dirir ah oo kuu geynaysa jawi hawo sare leh.
Noqo sayid masduulaagii, la dirir kuwa kale una diyaar garow saliibiyada ka socda Magaalada Dragon City
Dragon City waa ciyaar jilid dagaal ah oo xiiso leh taas oo ah inaad kor u qaaddo masduulaagaaga, aad u hesho kuwa kale, la tababarto oo aad dadka kale la kulanto.
Rally ugu fiican waa ciyaar lagu tartamo taas oo aad ku garaaci jirtay waqtiyadaada
Rally Best wuxuu sifiican u ciyaaraa kaarkiisa si uu noogu soo bandhigo ciyaar tartan fudud, laakiin leh faahfaahin muhiim ah sida qaabka muuqaalka ama wareegyadeeda.
Dareenka: Hooska Iftiinka, oo ah tallaabo tayo sare leh oo tayo sare leh RPG oo leh muuqaallo muuqaal ah
Qarsoodi: Hooska Iftiinka waa tallaabo sare oo RPG ah oo ay si adag uga shaqeeyeen wax kasta oo la xiriira heerka farsamo.
5 kulan oo Android ah oo lagu raaxeysto todobaadkan
5 kulan oo Android ah oo aad ku bixin doonto usbuucaan. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan cayaarahaan dukaanku ku dhacay Sebtember.
Ciyaaraha halxiraalaha ugu fiican ee Android
4 ciyaar xujo wanaagsan oo loogu talagalay Android. Soo ogow xulashada ciyaartan xujada ah ee aad ku soo dejisan karto taleefankaaga Android.
Bisad iyo eey wada socda oo raadinaya tacabur Meowoof, ciyaar gebi ahaanba bilaash ah
Meowoof waa cinwaan waxqabad oo kaa hor dhigaya bisad iyo eey ku xiran xarig. Xiiso leh saacado badan oo ciyaar ah.
[APK] Soo dejiso hadda Dragalia Lost: Nintendo's cusub ee xiisaha leh ee RPG oo ka kooban wax ka badan 2,75GB
Nintendo wuxuu hilibka oo dhan saaraa dusha 'Dragalia Lost' iyo in ka badan 2,75GB oo xog ah si uu ugu raaxeysto dhamaan ciyaarta RPG-ga ah.
Layton: tuulada qarsoodiga ah ee hadda laga heli karo Play Store
Cinwaankii asalka ahaa ee keenay barashada Professor Layton ayaa hadda ku soo degay Play Store.
Bubble Pop, ciyaar fudud oo caajis ah
Bubble Pop, soo dejiso ciyaarta ka dhigi doonta daqiiqado caajis ah iyo waqtiyadaada sugitaanka kuwo aad u dulqaadan kara adiga oo qarxinaya goobooyin xawaare buuxa
Capcom waxay sii deysaa sheekooyinka Monster Hunter ee ku saabsan Android ciyaar ahaan qiimo sare
Haddii aad ka ciyaareysay nooca 3DS ee 'Monster Hunter Stories', hadda waxaad isla sidaas ka sameyn kartaa taleefankaaga casriga ah markii laga bilaabayo Android.
Halyeeyga Marginalia waa RPG aad u gaar ah oo leh qaab muuqaal ah oo ay sameeyeen farshaxanno qarniyadii dhexe
Haddii aad jeceshahay ciyaaro kala duwan, geesiga Marginalia ayaa ka mid ah. RPG ah oo aad ku qasban tahay inaad taabato shaashadda si aad ugu dhufato hits.
[APK] Soo dejiso Ghostbusters World oo hadda ah barnaamijkaaga 'Android' si aad ugu ugaadhsato cirfiidyada hareeraha magaaladaada
Xaqiiqada 'Augmented' ayaa ku soo laabaneysa iftiinka cusub ee Ghostbusters World, ciyaar lagu soo bandhigay filimka sheeko xariifka Ghostbusters
Aynu dib u eegno Waddooyinka Caadiga ah ee Rage 2: feer nadiif ah oo Axel iyo Blaze kula socdaan mobilkaaga
Noloji ahaaneed, Waddooyinka SEGA ee Raage 2 waxay u yimaadeen inay si buuxda u gutaan waajibaadkeenna oo ay dib noogu celiyaan sannado kale.
Ku dayasho Rambo oo leh 'retro Rip' Em a New One, oo ah bahal arcade ah si uu u baabi'iyo qof walba
Waad ku dayan kartaa Rambo oo waxaad ku heli kartaa waqti nostalgic ah qaab arcade-gadaal ah oo aad ku baabi'ineyso cadaw badan adigoon saamaxin.
Dagaallada Omega: Horyaalada Galaxy waxay la socotaa dhacdadii Clash Royale, laakiin waxay la socotaa xaqiiqda 'Augmented Reality'
Haddii aad kujirto Xaqiiqda Dareenka, ma dhaafi kartid Omega Wars: Champions of the Galaxy, ciyaar PvP ah oo ah qaabka loo yaqaan 'Clash Royale'.
Pro Evolution Soccer 2019 wuxuu imaan doonaa Android bisha Diseembar
Pro Evolution Soccer 2019 wuxuu ka bilaabmi doonaa bisha Diseembar Android. Raadi wax badan oo ku saabsan bilawga ciyaarta cusub ee Konami sanadkan.
Waddooyinka Rage 2 Classic, magaca cusub ee 'SEGA Forever' wuxuu ku dhacaa Bakhaarka Play Store
Wadada cadhada 2 ayaa halkan taal, waxaan kuu sheegeynaa dhammaan faahfaahinta taxanahan ciyaarta caadiga ah ee 'SEGA Forever' ee hadda laga heli karo Play Store.
Flipflop Solitaire, ama siinta qallooca kalidaa inta uu nool yahay
Flipflop Solitaire waa ciyaar turubka ku saleysan oo aad rabto inaad halyeeygaas ugu rogto mid caadi ah.
Ciyaarta ugu fiican ee gamcaha loogu talagalay Android iyo iOS
Ku wad gaarigaaga Scalextric gaar ahaan XcaleHTR + Slot Car Jilitaanka for Android
XcaleHTR + Slot Car Simulation waa ciyaar u ekeysiinaysa Scalextric si aad u wanaagsan in wax walba laga helo shaashaddaada moobiilka.
Knights Infinite waa RPG oo leh dagaal ku saleysan waqti ku habboon
Inifinite Knights waa RPG oo leh dagaal isweydaarsi ku dhisan oo u muuqda muuqaalkiisa gadaal, in kasta oo ay weheliso xayeysiin badan.
Waxaan horey u ogaanay waxa ay yihiin Google Play Points, barnaamijka abaalmarinta ee dukaanka Google
Points-ka Google Play waxaad ku heli kartaa lacag-bixinno lacag la'aan ah, barnaamijyo iyo ciyaaro fiidiyow ah, iyo sidoo kale waxyaabo kale sida buugaag ama filimaan.
Ka xadi dalag shisheeyaha ajaanibta madadaalo
Space Loops waa arcade caadi ah oo leh qaab muuqaal ah oo wanaagsan, taas oo hadafkeenu yahay inaan ka helno badarka shisheeyaha sharta.
Tiirka waa tacabur 3D ah oo inta badan loogu talagalay xalinta xujooyinka
Tiirka waa ciyaar 3D ah oo kugu kaxaynaysa xujooyin kala duwan oo adduunka riyadiisa si fiican loo fuliyay. Wali waxay ku jirtaa beta.
Sida looga hortago taleefankaaga Android inuu kululaado marka aad ciyaareyso Fortnite
Sida looga hortago moobiilkaaga Androis inuu kululeysto ciyaarta Fortnite. Baro tilmaamahan si aad uga caawiso telefoonkaaga inuu diirimaad yeesho.
Dayrta Vampire: Asalka waa RPG aad u wanaagsan gebi ahaanba bilaash ah oo leh udgoon heer sare ah
Vampires Fall: Asalku wuxuu soo jeedinayaa RPG tayo leh oo kugu qaadaya adduunyo khiyaali ah. Si loo muujiyo jawiga lagu abuuray dhawaqa jawiga.
Wixii trekkies dhabta ah: hadda waxaad ku safri kartaa galaxyada Star Trek Trexels II
In Star Trek Trexels II waxaad u baahan doontaa inaad dhisato markabkaaga si aad ugu baxdo si aad u sahamiso booska bannaanka oo aad u hesho jilayaasha ugu sheekaysan ee taxanaha ah.
PUBG Mobile wuxuu gaaraa 20 milyan oo isticmaale maalinle ah caalami ah kaliya 6 bilood
PUBG Mobile waxay ku jabineysaa 20 milyan oo ciyaartoy bille ah oo firfircoon ciyaarta heerka sare ee hadda loogu talagalay mobilada.
OnePlus iyo Google waxay ku biiraan xooggooda si ay u abuuraan ciyaar
OnePlus iyo Google waxay abuuraan Crackables ciyaar cusub. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan kulankaan ka dhashay midowga labada shirkadood.
Waallida ugu qosolka badan ayaa mobilkaaga ugu imaaneysa H3H3: Ball Rider
H3H3: Ball Rider waa goob faneed aad u weyn oo aad ku soo aruurin doonto dhibco dhidid ah geesiga weyn ee u ceyrinaya.
[APK] Kala soo bax cusbooneysiinta Mobile-ka ee PUBG hadda khariidada 'Sanhok' cusub, qoriga ololka iyo waxyaabo kale oo badan
Laba baabuur oo cusub, khariidad cusub, qori cusub, qoryo olol ah oo loogu yeedho sanaadiiqda iyo inbadan oo intaa ka badan ayaa kugu sugaysa PUBG Mobile.
Wall Kickers waa barxad aad u weyn oo dhab ah oo loogu talagalay moobilkaaga Android
Barxad dhab ah waa waxa loo yaqaan 'Wall Kickers'. Ciyaar u taagan jilayaasha kala duwan ee waaweyn in la furo, mid walibana leh awooddiisa.
Fortnite horey ayaa loogu rakibay in kabadan 15 milyan oo qalab Android ah
Mid ka mid ah kulamada aadka loo sugayo ee suuqa mobilada ee Android, tan iyo markii uu yimid macruufka bishii Maarso ee la soo dhaafay, wuxuu ahaa Fortnite, ciyaar timid ilaa Tan iyo markii si rasmi ah loo soo bandhigay Agoosto 9, ciyaarta Fortnite waxaa laga soo degsaday 15 milyan oo jeer oo ku saabsan Android boosteejada
Armajet, oo ah faneed faneed iskutallaab badan oo faneed badan oo leh sawir gacmeedyo konsole iyo ficil badan
Armajet waa toogte multiplayer in uu ku jiro wajiga beta xiran oo waxaa lagu gartaa taxane ah wanaagga farsamo.
Alphabear 2 oo hadda laga heli karo Android: ku hagaaji ereygaaga adigoo higaadaya erayada Ingiriisiga
Haddii aad ku socoto wadadii aad ku hormarin lahayd Ingiriisigaaga, Alphabear 2 waa habka ugu wanaagsan ee lagu horumarin karo eray bixinta si loo kobciyo amarkayaga luqadda.
Fortnite for Android waxaa lagu cusbooneysiiyay aalado cusub oo la jaan qaadi kara iyo wadahadalka codka
Bilooyin badan oo xan ah kadib, shirkadda Epic Games waxay shaacisay helitaanka Fortnite ee nidaamka deegaanka ee Android. Intii lagu guda jiray seddexdii hore, cusbooneysiintii ugu dambeysay ee Fortnite ee loogu talagalay Android waxay ku dareysaa wada sheekeysiga codka ee muddada dheer la sugayay, kaas oo ciyaartoyda kooxdu ay hadal ahaan ugula xiriiri karaan ciyaarta.
Dowladda Shiinaha waxay dooneysaa inay xakameyso qabatinka ciyaarta fiidiyowga
Dowladda Shiinaha ayaa fulineysa tallaabooyin lagu joojinayo baahida daran ee macaamiisha u qabaan ciyaaraha fiidiyowga. Waxbadan ka baro qorshahan.
Ku ilaali biibiilaha aad jeceshahay dhammaan kharashyada ku kaca Rise up
Ciyaar si aad ugu gaarto meelaha ugu sarreeya buufinkaaga, illaa iyo inta aysan daloolin kumanaan walxaha isku dayi doona inay baabi'iyaan.
Klick Klack - Waa god yar oo qaloocan oo loogu talagalay halxiraalaha hal-abuurka leh
Klick Klack waa xujo fudud oo aad ku caawin karto kubad si loo soo ururiyo dhammaan dahabka ka muuqda jidkeeda.
Super Starfish, ama soo ururi daraasiin kalluun bannaan ah si aad nolosha aquarium-kaaga ugu noolaato
Super Starfish ayaa la oran karaa waa mid ka mid ah dhacdooyinkii ugu fiicnaa ee la soo saaray sanadkan. Qarax dhammaystiran oo garaaf ah oo gaadha shaashadda mobilkaaga.
Isku dayga cayaaraha kahor intaadan iibsan waxay noqon doontaa mid dhab ah Play Store
Kuwo badan ayaa ah dadka isticmaala ee aan rabin inay iibsadaan codsi ama ciyaar iyaga oo aan marka hore isku dayin, maaddaama hannaanka soo noqoshada uusan ahayn waxa la yiraahdo ma fududaan doono Mar dhow, waxaan awoodi doonnaa inaan tijaabino codsiyada iyo cayaaraha Pla Store adigoon haysan si aad horey ugu iibsato ama aad ugu soo dejiso burcad-badeed
Isku darka buskudka oo dhan ayaa kugu sugaya Cookie Wars si aad u wajahdo ciyaartoy kale
Dagaallada cookie-ga waa ciyaar si fiican looqiyaastay oo lagu ilaaliyo munaaradda oo leh waxyaabo badan iyo qibrad farsamo oo heer sare ah.
Grand Mountain Adventure waxay soo jeedineysaa ciyaar baraf ah oo aan horey loo arag
Soo qaado barafkaaga oo madaxaaga Grand Mountain Adventure, oo ah ciyaar barafka dhabta ah oo aad ku sahmin doonto buuro furan si aad ugu raaxaysato.
The Dragon weyn oo Gaajo ah oo hadda laga heli karo Android: noqo masduulaa aad u cunitaan badan
Diyaar u noqo inaad wax ka qabato masduulaagii hunguriga badnaa ee xiisaha iyo xiisaha badnaa Dragon Dragon. Ciyaar noqonaysa mid ka mid ah kuwa ugu fiican sanadkan.
Dragalia Lost waa ciyaarta Nintendo ee soo socota ee lagu bilaabi doono Sebtember 27 loogu talagalay mobilada
Dragalia Lost waa ciyaarta Nintendo ee asalka u ah aaladaha mobilada ee soo degi doona Sebtember 27. Imaatin dhan
Kalluumeysiga Kalluumeysiga, beddelka bilaashka ah ee Kalluumeysiga Kalluumeysiga
Kalluumeysiga Kalluumeysiga ayaa ah mid lagu beddelan karo Kalluumeysiga Caannimada ee caanka ah ee lagu garto inuu yahay mid bilaash ah.
Rakibiyaha Fortnite wuxuu lahaa dhibaato amni oo daran
Iyadoo la soo bandhigayo Galaxy Note 9, ayaa timid ogeysiiska rasmiga ah ee Epic Games ee bilaabista Fortnite, oo ah mid ka mid ah kulamada aadka loo filayo, Qalabka rakibayaasha 'Epic Games' si uu u soo dejisto Fortnite qalabka Android wuxuu lahaa cilad amni oo halis ah oo Google soo ogaatay taasna horay ayaa loo xaliyay.
Madden NFL Overdrive Football waxay kaa dhigeysaa inaad dareento inaad qeyb ka tahay koox kubbada cagta Mareykanka ah
Madden NFL Overdrive Kubadda Cagta waxay ka timaaddaa Farshaxanka Elektarooniga ah ee laga soo dhisay korka waxayna muujineysaa daqiiqadda ugu horreysa ee aan bilowno
Thunderdogs waa ciyaar eey ".io" ah oo leh diyaarado badan iyo baashaal badan
Thunderdogs waa ciyaar khadka tooska ah loogu tartamo oo aad kala kulanto ciyaartoy kale tijaabada duulimaadyada diyaaradaha dagaalka.
Uk u toog si aad uga samatabbixiso saaxiibbadaada digaagga ah meydadka FireEgg
FireEgg kuma dhici doono taariikhda ciyaarta fiidiyaha, laakiin waxay kaa dhigeysaa waqti fiican. Gaar ahaan ilaa intaad ka helayso hagaajinta digaagga.
Ku keydi adhiga yar ee macaan ee xiisaha leh Bye Bye Sheep
Bye Bye Sheep waa ciyaar xiiso leh oo ay tahay inaad ka badbaadiso idaha yar yar mindi duurjoogta ah oo cabsi badan oo ka soo baxda kaynta.
Si aad ugu isticmaasho shaashadda si aad ugu ilaaliso nacnacaaga nalka loo yaqaan 'Candy Patrol' weyn
Markan waxaan helnay bahallo badan oo rabay nacnacyadayada. Ku dhammee iyaga ilaalinta Candy ee shaashaddaada
Ku tababbar xusuustaada ciyaarta mala awaalka xiisaha leh Guess Face to "Waa kuma ayo"
Guess Face waa hawo nadiif ah oo loogu talagalay Google Play Store adoo soo jeedinaya inaad xafiddo astaamaha ugu muhiimsan ee astaamaha ilbiriqsiyo.
Pokémon Go wuxuu xannibaa taleefannada leh faylasha la xiriira xididka
Pokémon Go wuxuu ceyrinayaa dadka isticmaala faylasha xididka. Ka ogow wax badan oo ku saabsan mawjaddan shilalka ee ciyaarta Niantic maalmahan.
Badmaaxe Bisaduhu waa waxa ku cusub istuudiyaha ciyaarta Madrid ee loo yaqaanno Cayaaraha Cayaaraha
Badmaaxe Bisadaha waa ciyaar aruurin ay sameysay istuudiyaha Madrid oo runtii doonaya inuu noqdo tixraac.
PUBG Mobile Season XNUMX wuxuu bilaabmayaa Arbacada
Diyaar u noqo inaad ku qaabisho dhamaan xabadkaas aad heshay Arbacadan bilowga xilli ciyaareedka cusub ee PUBG Mobile.
Ciyaaraha Premium Premium ee soo dejinta mudan
Seddex kulan oo qiimo sare leh oo qiimo leh oo laga soo dejisto. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan ciyaartan qiimaha leh ee taleefannada Android.
King wuxuu noo keenayaa wax cusub: Legend of Solgard, oo si wanaagsan loo farsameeyay oo loo yaqaan 'RPG'
Haddii aad taageere u tahay ciyaaraha KING, halkan waxaa ku yaal wax ka duwan sidii wax looga qaban lahaa Legend of Solgard, ciyaar freemium ah.
Bendy ee Nightmare Run, oo ah orodyahan aan dhammaad lahayn sida Cuphead ee moobiilkaaga Android
Bendy ee Nightmare Run ayaa ah mid si fiican loo daryeelo orodyahan aan dhammaad lahayn oo ku yaal astaamaha 'Cuphead' taas oo kuu oggolaan doonta inaad ku baratid animation-ka 30-ka.
5 tabaha si aad u noqoto ciyaaryahan ka fiican Fornite ee Android
Waxaan ku baraynaa 5 tabaha lama huraanka ah si aad ciyaartoy fiican ugu noqoto Fortnite ee Android. Cinwaan keena dhammaan muuqaalka muuqaalka qaabab duug ah.
Kung Fu Z, ama sida looga badbaadiyo bini-aadamka mar kale apocalypse zombie (markan laad)
Haddii zombies iyo fanka legdinta ay yihiin waxaaga, Kung Fu Z waa ciyaarta ugu habboon. Dib ugu noqo dhadhankii hore ee arcade.
Gudaha KleptoDogs eeyaha yaryar ee aadka u quruxda badani waxay ku sugayaan adiga inaad daryeesho, maydho oo aad abaalmarinto
KleptDogs waa ciyaar madadaalo leh oo aad ku ogaan doonto sida loo daryeelo eeyo badan. U dir shey si aad u soo ururiso.
Ku noolow jidhkaaga khibrada argagaxa leh ee Aqoonsiga V
Aqoonsiga V waa ciyaar naxdin leh oo kugu ridi doonta kabaha baare iyo taxane jilayaal kale ah. Xitaa waxaad noqon doontaa ninka xun ee filimka.
Ciyaaraha bowling-ka ee ugu wanaagsan Android
Afarta kulan ee Bowling-ka ee ugu wanaagsan Android. Soo ogow xulitaankan ciyaaraha bowling-ka ee taleefannada gacanta ee horeyba loo heli jiray
Halyeeyada Disney: Dagaalka Mode wuxuu kuugu keenayaa dhamaan geesiyaasha Disney iyo Pixar hal talaabo RPG
Halyeeyada Disney: Dagaalka Mode waa ciyaar leh xoogaa taabasho door ah oo aad u baahan tahay inaad sameysato koox si aad u badbaadiso fayraska magaalada dhijitaalka ah.
PUBG MOBILE Lite: Nooca mobilada oo kayar 2 GB oo RAM ah
PUBG MOBILE Lite: Nooca loogu talagalay telefoonada dhamaadka-hooseeya. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan noocyadan cusub ee ciyaarta ee taleefannada hooseeya,
Fortnite waxay u fureysaa diiwaangelinta beta qalabka kala duwan ee Android. Ogow kuwa ku habboon!
Ciyaaraha Epic ayaa hadda furay diiwaangelinta loogu talagalay beta Fortnite aalado kala duwan. Waxaan ku tuseynaa liiska taleefannada iswaafajiya!
Might & Magic: Mas'uuliyiinta Elemental waxay u qaataan shaashaddaada moobilka ciyaar wanaagsan oo RPG ah
Might & Magic: Mas'uuliyiinta Elemental waa RPG oo leh dagaal ku salaysan oo kuu keenaya adduunka oo dhan oo sixir ah oo qosol weyn leh.
Leaked 5 daqiiqo oo ciyaarta Fortnite ah ee Android
Ku daatay gameplay Fortnite ah taleefanka Android. Raadi wax badan oo ku saabsan sida ciyaarta Epic Games ay ugu shaqeyso Android.
Xog cusub oo ka socota Fortnite ku meel gaar ah oo loogu talagalay Galaxy Note 9
Waxaan ka helnay xog cusub Fortnite ku meel gaar ah oo loogu talagalay Samsung Galaxy Note 9
Tareenadu waxay ku qaadanayaan inaad ku kaxeeysid taraafikada tareenka ciyaar lagu dhiiri geliyay Mini Metro
Tareenadu waxay ku daweeyaan muuqaal muuqaal ah qaabkaas sawir. Maamul taraafikada taraafikada ee mari doonta magaalooyin kala duwan.
Lagdamaaga Rowdy waa ciyaar dagaal oo xiiso leh oo kaa qoslin doonta adiga oo cod dheer
Rowdy Musaaricadu waxay u taagan tahay sida ay u xiisaha badan tahay iyo sida nacaybka u leh animations of legdinta waajibaadka saaran. Ciyaar bilaash ah.
Shuruudaha Fortnite Android ayaa shaaca laga qaaday
Waa maxay shuruudaha ay tahay in taleefankaaga Android uu buuxiyo si loo rakibo Fortnite. Soo ogow shuruudaha ay tahay inay buuxiyaan si loo rakibo ciyaarta.
Wall Wall waa xujo nasasho leh oo ku habboon qaybaha joomatari
Wall Space waa xujo raaxo leh oo lagu raaxeysto muusiggeeda nasashada inta aan isku shaandheynno tirooyinka joomatari ee isku dhafan si aan uga dhigno kuwo ku habboon.
Kuwa ugu fiican Nintendo 64 emulators ee Android
Shanta ugu fiican Nintendo 64 emulators ee Android. Raadi wax badan oo ku saabsan xulitaankan emulators inaad kala soo baxdo Android.
Amarada hore ee Galaxy Note 9 waxay la imaan doonaan $ 150 si loogu kharash gareeyo Fortnite
Amarka horudhaca ah ee Galaxy Note 9 wuxuu la imaan doonaa lacag lagu qarashgareeyo Fortnite. Ciyaaraha Epic iyo Samsung waxay ku biiraan xooggooda si kor loogu qaado wax soo saarkooda.
Ku abuur heerar heerarka MagiCats Builder ee kuwa kale inay ciyaaraan
Iyada oo la adeegsanayo MagiCats Builder waxaad awoodi doontaa inaad u dhaqanto sidii abuure heerar ah sidii aad ahaan lahayd naqshadeeye istuudiyaha ciyaarta fiidiyowga ee la mid ah Super Mario Maker.
Sonic The Hedgehog 4 Episode II: The SEGA New Game Weligiis
Sonic The Hedgehog 4 Episode II: Ciyaarta cusub ee SEGA Forever. Raadi wax badan oo ku saabsan ciyaarta cusub ee bilaashka ah ee laga heli karo Dukaanka Play.
Abuur daayeer adoo ku soo ururinaya Daanyeeryada si aad u soo saarto waxyaalaha qarsoon ee galak
Innokeynauts-ka waxaad u baahan doontaa inaad sahamis ku sameysid galaxy gacanta ku haysa daanyeerrada qaarkood oo ay tahay inaad soo uruuriso si ay u kobcaan. Guji dhagsii.
Inbadan «Battle Royale» mobilkaaga Android oo leh caan ku ah 99 iyo garoonkiisa 100-ciyaartoy
Haddii aad taageere ka tahay Battle Royale, waxaad horey u haysatay hilib badan oo aad ku cunto Notorious 99: Battle Royale, ciyaar cusub oo beta ah.
Raadi khasnado aan caadi ahayn oo ku jira godadka qarsoodiga ah ee Relic Looter
Relic Looter ayaa ku geyn doona god weyn oo ay ka buuxaan khasnado aad ku ciyaari karto Indiana Jones sida filimadiisa.
Asphalt 9: Halyeeyada ayaa ku yimaada Android iyada oo orodku xawaare ku socdo iyo dhaqdhaqaaqyo wadista xiisaha leh
Asphalt 9: Halyeeyada ayaa ujeedkeedu yahay inay noqdaan ciyaarta xagaaga iyadoo la haysto ogolaanshaha PUBG Mobile iyo Fortnite markay ku dhacdo Android.
Kuwani waa taleefannada casriga ah ee ku habboon Fortnite on Android
Wax yar ka hor usbuuc ka hor, raggii ka socday XDA Developers ayaa ku dhawaaqay in wax waliba u muuqdeen inay muujinayaan in awoodda weyn ee Samsung ay heshiis la gaadhay Haddii aad rabto inaad ogaato haddii terminaalkaagu uu la jaanqaadi doono Fortnite markay tahay Android, markaa waan ku tusinaynaa waxa moodooyinka la jaan qaadaya.
5 kulan oo bilaash ah oo loogu talagalay Android
Shan kulan oo bilaash ah oo Android ah oo xagaagan la ciyaaro. Kala soco xulashadan ciyaaro bilaash ah oo aad ku raaxeysan karto xagaagan.
Ciyaaraha Android ee taleefannada shaashadda waaweyn
Ciyaaraha Android ee taleefannada shaashadda waaweyn. Soo hel xulashadan shanta kulan ee ugu habboon haddii aad leedahay taleefan leh shaashad ballaaran.
Son Goku wuxuu kugu sugayaa halyeeyada loo yaqaan 'Dragon Ball Legends' iyo dhamaan astaamaha uu abuuray Toriyama
Legends-ka loo yaqaan 'Dragon Ball Legends' waa guul aan laga gaarin gabi ahaanba koonkan oo dhan oo uu abuuray kartooniistaha weyn ee Toriyama.
Fortnite for Android waxay si gaar ah ugu imaan doontaa Samsung Galaxy Note 9
Fortnite wuxuu gaar u noqon lahaa Galaxy Note 9 bisha ugu horreysa. Wax badan ka ogow heshiiska labada dhinac ay wada gaari lahaayeen bilowgiisa.
Alto´s Oddisey ayaa hadda loo heli karaa Android: ku duuli miiska ciidda mid ka mid ah ciyaaraha sanadka
Alto´s Oddisey wuxuu ku yimaadaa Android si heer sare ah muuqaal ahaan. Haddii aad haysato mobiil leh shaashad ballaaran, waxaad ugu raaxeysan doontaa sida cows oo kale kulankaan.
Cusbooneysiinta moobiilka ee PUBG nooca 0.7.0 hadda waa la heli karaa: qaab dagaal oo cusub oo leh nolol aan dhammaad lahayn
Nolosha aan dhamaadka lahayn waxay kugu sugeysaa PUBG Mobile qaabka cusub ee Dagaal ee maanta yimid ee cusbooneysiinta nooca 0.7.0.
Si loo jaro cawska oo lagu baashaalo Lawska Mowy
Moly Lawn waa ciyaar iska caadi ah oo aad ku goynayso jardiinooyin badan oo jardiinooyin ah. Jarjartu waxay noqon doontaa saaxiibkaaga ugu fiican.
Horizon wuxuu ku geynayaa adduunyo "teknoloji" ah oo ay tahay inaad ka fogaato caqabadaha markabkaaga
Horizon waa ciyaar iska caadi ah oo kugu dhejineysa kontaroolada markab ay tahay inuu ka fogaado dhammaan caqabadaha uu ka heli doono waddadiisa.
Ka caawi Max awooddiisa dheeraadka ah ee Nolosha waa mid qariib ah, waa qibrad weyn oo muuqaal ah
Square Enix wuxuu noo keenayaa riwaayad aad u wanaagsan oo muuqaal ah oo ku saabsan barnaamijkeena 'Android with Life is Strange', si uu uga caawiyo Max awooddiisa dheeraadka ah.
Tilmaamaha iyo tabaha ugu fiican ee Pokemon Quest
Shan talooyin iyo tabaha lagu guuleysto Pokemon Quest. Soo hel khiyaanooyinkan aad ugu fiicnaan karto ciyaarta caanka ah ee Pokemon.
Ciyaaraha dabaasha ee ugu wanaagsan Android
Ciyaaraha dabaasha ee ugu wanaagsan Android. Soo ogow xulkan cayaaraha dabaasha ee laga heli karo Play Store si aad hadda u soo dejiso.
Bisadaha 'Super Idle Cats' waa guji weyn oo lagu sameeyo bisadaha cuntada ay jecel yihiin: nooc kasta oo miro ah
Super Idle Cats waa guji kaas oo ay tahay inaad soo saarto dhammaan miraha aad awoodid si aad uga iibiso bulshada bisadaha xiisaha leh.
GALAK-Z: Variant Mobile wuxuu ku daraa walxaha RPG iyo MECHS booska dagaalka
GALAK-Z: Variant Mobile waa ciyaar RPG meel bannaan ah oo lagu soo hagaajiyay astaamaha marka la barbar dhigo kumbuyuutarkiisa iyo nooca loo yaqaan 'Console'.
Ciyaaraha BMX ee ugu wanaagsan Android
Shanta kulan ee BMX ee ugu wanaagsan Android. Soo hel xulkan cayaaraha BMX ee aan ka heli karno Play Store.
Xiddiga feedhka waa mid naxariis daran - u halgama sidii aad u noqon lahayd horyaal feedhka adduunka ah
Haddii aad raadineyso ciyaar aad kuhesho fasaxan, Boxing Star waa midka ugufiican sawirada cajiibka ah iyo sheeko weyn.
Orodyahan aan dhammaad lahayn oo zombies ah oo leh Super Awesome Hyper Freaking Zombie Run
Haddii aad taageere u tahay ciyaaraha zombie ama filimada, waa inaad rakibtaa Super Awesome Hyper Freaking Zombie Run. Magac dheer oo loogu talagalay ciyaar kale oo zombie ah.
Foornada u dhaqaaji si aad kubbadda uga leexiso dhinac ilaa dhinac Portal Drop
Portal Drop waa ciyaar asal ahaan aad u baahan tahay inaad cabirto saameynta ka saarista qaar ka mid ah qaybaha ama kuwa kale sawir weyn.
Sida loogu ciyaaro ciyaaraha kombiyuutarkaaga moobilkaaga gacanta ee loo yaqaan 'Steam Link'
Steam Link wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku ciyaarto ciyaaro uumi ah oo aad jeceshahay oo ku saabsan mobilkaaga Android illaa inta aad ka wada socoto isla isku xirnaanta deegaanka.
Ciyaarta aad ku noqon doontid boqorad, Xukunka: Boqortooyadeeda, waxaa lagu cusbooneysiiyay 200 kaararka cusub
Saraakiisheeda: Majaajilisteeda waa ciyaar qaas ah oo lacag lagu bixiyo oo lagu iibinayo 33% dhowr maalmood si loogu dabaaldego imaatinka cusboonaysiinta.
Alto's Odyssey waxaa laga heli karaa Play Store laga bilaabo Luulyo 26
Sanadihii la soo dhaafay, gaar ahaan istuudiyaha madaxbannaan, ma aysan dooran inay bilaabaan ciyaartooda ama barnaamijyadooda gudaha nidaamka deegaanka ee Android, sababtoo ah ciyaarta cusub ee 'Alto skier', Alto's Odyssey wuxuu ku dhufan doonaa Play Store bisha Luulyo 26 waxayna ku heli doontaa bilaash barnaamijka gudaha. iibsashada iyo xayeysiiska
SSR waa ciyaar madal aad u adag oo soo jiidasho leh
SSR waxay kaa sii daahaysaa sida ay u ciyaareyso iyo dhibaatadaas oo awood kuu siineysa inay ku noolaato markasta markasta oo aad ciyaareyso.
Battlelands Royale waxay raacdaa raadadkii PUBG iyo Fortnite, in kasta oo laga eegay aragti ka duwan
Ku habboon qalabka moobiillada, Battlelands Royale waa dagaal royale ah oo aragtida laga qabanayo xagga sare.
Ku guuleysato meel la mid ah Karaz's Conquest: RPG, qaabka muuqaalka retro iyo xoogaa arcade
Haddii aad raadineyso ciyaar waxoogaa ka duwan inta kale, Guusha Karaz ayaa leh waxaas oo dhan iyo in ka badan maadaama ay tahay istiraatiijiyad isdaba-marin ku saleysan RPG iyo ciyaar arcade ah.
Dunida Tennis-ka: Guuxa '20s ayaa kugu kaxeeya ciyaarta tennis-ka ee ugu wanaagsan Android-kaaga
Dunida Tennis: guuxida 20's waa ciyaar tennis aad u weyn oo loogu talagalay qalabkaaga Android kaas oo aad ku qaadan karto saacado kaamil ah istaroogyadaada dhabarka.
Madadaalo kale oo aan caadi aheyn oo ka socota Ketchapp: Cubriko iyo muuqaalkeeda vector-ka
Cubriko waa casriyayn cusub oo ka socota Ciyaaraha Ketchapp oo ku sharfa istuudiyaha kulamadaas xiisaha leh iyo dhameystir farsamo oo wanaagsan.
Ciyaaraha skateboarding-ka ee ugu wanaagsan Android
Shanta kulan ee skateboardingka ugu wanaagsan Android. Waxbadan ka ogow xulkan ciyaaraha skateboarding-ka oo aad hadda kala soo bixi karto Android-ka.
Dhimashada Socodka: Adduunkeenu wuxuu u keenayaa apocalypse zombie xaafaddaada ama magaalada sida Pokémon GO
Dhimashada Socodka: Adduunkeenu wuxuu xaafaddaada u beddelaa meel aakhiro oo u baahan tahay inaad ku disho boqollaal lugeeyayaal ah.
Ka baxso geeri gaar ah adoo gacmahaaga kujiraan qabatimaada Clumsy Climber, oo ka cusub Ketchapp
Markaynu nahay Climber Clumsy waa inaan ka badbaadinaa nafteena dhimashada innaga oo ku hafan doonna taas oo aan ku halaageyno haddii aynaan si fiican u adeegsan gacmaheena.
Burburinta Rush, oradyahan kale oo aan dhammaad lahayn oo taabasho leh qaabka «Parkour»
Smashing Run waxaad ku tababbari kartaa Parkour shaashaddaada moobaylka adoo wata ciyaar aad u qurux badan oo dhinaca farsamada ah.
Ka dhis gurigaaga naxdinta leh Chills HorrorTown
Chills HorrorTown waa ciyaar dhisme ah oo dulucdiisu tahay mid ka mid ah filimadaas cabsida leh ee soo saari kara argagax aad u badan.
PUBG Mobile hadda waxay leedahay nooc beta ah oo ku yaal Play Store
Nooc cusub oo ah PUBG Mobile ayaa dhawaan la soo saari doonaa laakiin inta ka horeysa waxaad ku tijaabin kartaa tijaabadeeda cusub ee beta
Flutter Starlight waxay kuu kaxaysaa adduun sixir ah oo aboor iyo dab-damis taas oo ay tahay inaad ka caawiso inay koraan. Ciyaar ka duwan kuwa kale.
Xujo A cunto karinta leh Push Sushi iyo cuntooyinkeeda xiisaha leh
Push Sushi waa xujo si wanaagsan loo fuliyay si aad ugu raaxeysato karinta saxankaas oo ah mid caan ku ah waddanka Jabbaan. Waa bilaash inaad hadda ku rakibto.
Ku dayasho Tony Hawk oo leh skateboard-ka Epic Skater 2
Epic Skater 2 waa ciyaar skateboarding ah oo bixisa xoogaa xoriyad ah si loogu maro heerarkeeda. Baro ollies si aad u guuleysato.
Baabi'i, sahamiya oo ku dhis halxiraalaha boos ee loo yaqaan 'Space Pioneer'
Space Pioneer waa hawo nadiif ah oo ku taal toogashada 'up ilaa aan ka helno Google Play Store. Baabi'i, sahamiya oo ku dhis kulankaan cusub.
SHARXAD XUMO, xayeysiis, heterodox iyo sheydaan sheydaan leh heerar ballaaran
DERE EVIL EXE waa madal-dejiye isku dayaya wax ku cusub nooca la yaqaan 'platformer' ee la garaacay. Haddii aad tahay taageerayaasha nooca, muhiim
Laga soo bilaabo abuurayayaasha 'Saga Candy Crush Saga' wuxuu ka yimaadaa Dheeman Dheeriga Saga: Isku xidhka soojiidashada si loo abuuro jawharad!
Diamond Diaries Saga waa ciyaar kale oo xujo ah oo la timaadda astaamo cusub sida xoogga culeyska cufnaanta jilayaashaas badan oo la isku daro.
Ciyaaraha ugu fiican Arcade ee loogu talagalay Android
Afarta kulan ee Arcade ee ugu wanaagsan Android. Soo ogow xulitaankan ciyaaraha arcade ee aad kala soo bixi karto Play Store
Rocket Valley Tycoon ayaa kaa qaadeysa ka hor tartanka booska si aad gantaallo ugu qaaddo stratosphere
Haddii tartanka booska iyo ganacsigu ay yihiin waxaaga, waxaad horey ugu dayan kartaa Elon Musk ee Rocket Valley Tycoon, oo ah ciyaar maarayn kheyraad dhameystiran.
Ciyaaraha ugu fiican minimalist ee Android
Shanta kulan ee ugu fiican minimalist ee Android. Soo ogow xulashada ciyaartan yar yar ee aad u isticmaali karto taleefankaaga Android.
Ku ilaali jasiiraddaada Badbaadiyeyaasha Jasiiradda: burburi zombies-ka oo dhisto turre
Ku dhufo zombies, dhis buuryo oo ka ilaali jasiiraddaada Jasiiradda Dead Island badbaadiyeyaasha, ciyaarta caanka ah ee kombiyuutarada iyo kombuyuutarrada hadda mobilkaaga ku jira.
Qod aan joogsi lahayn si aad u badbaadiso qofka aad jeceshahay ee Diggerman-ka aan caadiga ahayn
Diggerman waa ciyaar deg deg ah oo aan caadi aheyn oo aad ku badbaadin doonto amagaaga oo uu afduubay Rabid Mole.
Ciyaaraha sheydaanka ee Ping Pong King: waa ciyaar caadi ah oo sifiican loo ilaaliyo
Haddii aad rabto inaad daqiiqado yar oo xiiso leh ku qaadato ciyaar la qabatimay, kani waa Ping Pong King. Ciyaaraha soonka iyo sheydaanka.
Soo dejiso Raskulls: Khadka tooska ah hadda: ciyaaro badan oo ka socda abuurayaasha Fruit Ninja
Raskulls Online waxay dooneysaa inay ku dhejiso shaambadeeda aqoonsiga leh baloogyadaas ka hortagaya marinka boqolaalka cadowga ee ciyaaraha multiplayer
Asphalt 9 Legends: Diiwaangelin hore ayaa horay looga furay Google Play
Asphalt 9: Legends pre-diiwaangelinta ayaa ka furan Google Play. Raadi wax badan oo ku saabsan ciyaarta cusub ee Gameloft ee dhowaan iman doonta Android.
Ciyaaraha ugufiican ee loogu talagalay Android
Shanta kulan ee ugu fiican ee loogu talagalay barnaamijka loogu talagalay Android. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan xulashadan ciyaaraha hareeraha ee loogu talagalay Android ku habboon xagaagan.
Ciyaaraha Android oo ku saleysan taxanaha TV-ga
Afar kulan oo Android ah oo ku saleysan taxanaha telefishanka. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan ciyaarahan oo ku saleysan taxanaha TV-ga ee laga heli karo Play Store.
U kaxee gantaallo fara badan gantaalaha cirifka geesaha koonka 2
Haddii aad jeceshahay sahaminta hawada, hubaal Space Frontier 2 waa mid ku habboon in lagu kulmo gantaallada hawada sare.
Gumeysi iyo qaabeynta meerayaasha TerraGenesis, ciyaar istiraatiijiyadeed oo aan la seegi doonin
TerraGenesis waxay kuu kaxaynaysaa xuduudaha Caalamka si aad u terraform meerayaasha iyo ilbaxnimadaadu ugu barwaaqowdo gumaystayaashaada.
Pokémon Quest wuxuu yimaadaa Android: jilayaasha aad jeceshahay ayaa loo beddelay xabadaha
Pokémon Quest waxaa hadda laga heli karaa Android iyada oo ah ciyaar qurux badan oo madadaalo leh oo qaab muuqaal ah loo xushay oo kooban.
Ciyaaraha Kubadda Cagta waxay kuu keenayaan «Tiki taka» ee xulka qaranka mobilkaaga Android
Koobka Kubadda Cagta waa ciyaar fiidiyoow ah oo loo yaqaan 'arcade video game' oo doonaya inuu isticmaalo tiki taka si aad uga hor tagto goolhayaha hortiisa isla markaana aad u dhaliso gool.
Sababa dhimasho iyo nafta goosashada xiisaha dhimashada
Imaatinka Dhimashadu waa soo jeedin asal ah oo adiga oo ku dhejinaya dhinaca geerida halkii aad ka noolaan lahayd, sida ku dhacda ciyaaro badan.º
Ciyaaraha ugu wanaagsan ee SEGA ee loogu talagalay Android
Soo ogow xulitaankan ciyaaraha SEGA ee aan kala soo dagsan karno Android. Waxaa ku jira ciyaaraha SEGA Forever ee laga heli karo Play Store.
Bethesda waxay u gudbisay Warner Bros maxkamad ciyaarta Westworld: isticmaal koodhka Hoyga Fallout
Warner Bros iyo abuurayaasha Westworld ayaa maxkamad la soo taagay Bethesda iyaga oo adeegsanaya lambar labaad oo gabood fal ah oo loogu talagalay ciyaarta cusub.
Ciyaarahaaga khadka tooska ah uga sii daa Mobcrush, bulsho dhan ayaa ku sugeysa
Mobcrush waa beel ka mid ah cayaartooyda lagu tilmaamo u oggolaanshaha kumanaan ciyaartoy ah inay si toos ah u sii daayaan ciyaaraha tooska ah ee internetka.
Alto's Odyssey wuxuu garaaci doonaa Google Play Store bisha Luulyo
Nooca labaad ee 'Alto's Adventure' wuxuu ku dhufan doonaa Play Store oo ay weheliyaan Alto's Odyssey bisha July ee soo socota
5 tabaha cusbooneysiinta cusub ee PUBG Mobile-ka ah oo aad hubaal iska indhatirtay
Cusbooneysiinta cusub ee PUBG Mobile waxay qarinaysaa shan astaamood oo cusub oo noqonaya shan tabaha si waxbadan looga helo dagaalkan weyn ee royale.
5 Tilmaamood oo Muhiim ah oo loogu talagalay PUBG Mobilada: Sida Loo Noqdo Gamer Ka Wanaagsan Oo Loo Gaadho Wareegga Ugu Dambeeya
Haddii aad tahay ciyaartoy keligiis safta ama aad raacdo koox saaxiibo ah PUBG Mobile, shantan tilmaam waxay qiimo weyn ku yeelan doonaan dagaalka.
Ciyaarta Westworld ee loogu talagalay soo bixitaanka Android ee Juun 21
Ciyaarta Android ee taxanaha caanka ah ee Westworld ayaa soo socota, waxaan kuu sheegi doonaa waxa ku saabsan iyo sida aad hadiyado ku heli karto
Pokémon Tag u soo bandhig sheyga iyo isweydaarsiga Pokémon
Pokémon Go wuxuu soo bandhigayaa isdhaafsiga asxaabta. Raadi wax badan oo ku saabsan isbeddelada ku imanaya ciyaarta Niantic ee u oggolaan doonta tababarayaasha inay saaxiibo noqdaan.
Cusboonaysiinta Moobilka cusub ee PUBG: aragtida qofka-koowaad, qaab cusub "Mini-Zone" iyo wax badan oo dheeri ah
Ka dib markii la helay khariidada cusub ee Miramar toddobaadyo ka hor, PUBG Mobile waxay hadda heshay cusboonaysiinta qaabka qofka ugu horreeya iyo wax ka badan.
La ciyaar Koobka Adduunka Kubadda Cagta Stickman Soccer 2018
Isku xigxiga oo loo yaqaan 'Stickman Soccer 2018' wuxuu halkan u joogaa sidii ciyaar kubbadda cagta oo aad ku ciyaari kartid ciyaaro deg deg ah intaad daawaneysid Koobka Adduunka.
Jurassic Hopper, caadi ah «Jurassic» a la Crossy Road
Haddii dinosaursku yahay waxaaga, Jurassic Hopper waxaad sugi doontaa wax badan oo aad noloshaada ku dhammaysato "caadi" wanaagsan.
Ciyaaraha golf-ka ee ugu wanaagsan Android
Shanta kulan ee ugu fiican golf-ka ee Android. Soo ogow xulitaankan ciyaaraha golf-ka ee laga heli karo Dukaanka Play-ka maanta.
Soo dejiso Ark: Badbaadinta waxay ujirtay Android hadda
Waxaad hadda soo dejisan kartaa ARK: Badbaadinta waxay ku soo baxday Android wixii hadda ka dambeeya, gebi ahaanba waa bilaash oo waxay ku shaqeysaa aalado badan
Gas gaaska ku jira PAKO 2 si aad u tuurto booliska
PAKO 2 ayaa gadaal gadaal kuu dhigeysa si aad uga baxsato booliska kula socda gawaari fara badan. Ciyaar ficil ah oo heer sare ah.
Birdy Trip, ama markay hagaagto wixii ahaa Flappy Bird
Birdy Trip waa ciyaar tayo sare leh oo si buuxda loogu dhex milmay waxa loogu yeero "Casual". Waxaad u baahan doontaa inaad caawiso shimbir fiican si aad uga baxdo dhibaatada.
Ciyaaraha Android si aad ugu raaxaysato toddobaadkan
Afar kulan oo Android ah oo lagu raaxeysto toddobaadkan. Baro xulkan cayaaraha oo aad usbuuca ku qaadaneyso qaab ka xiiso badan.
Ciyaaraha laxanka ugu fiican ee Android
Afarta kulan ee laxanka ugu fiican Android. Soo ogow cayaaraha laxanka, nooc ka mid ah oo caan ku noqonaya waqtiga.
Ciyaaraha ugu fiican The Walking Dead for Android
Afarta ugu fiican The Walking Dead games ee Android. Soo ogow xulitaankan ciyaaraha Android oo ku saleysan taxanaha caanka ah.
Afarta kulan ee ugu fiican Dragon Ball ee loogu talagalay Android. Ka ogow wax badan oo ku saabsan xulashadan cayaaraha in badan oo ka mid ah sheekooyinka ku yaal Play Store-
MSI waxay bilaabi doontaa codsi noo oggolaan doona inaan ku raaxeysano ciyaaraha Android ee kombuyuutarka
Soo saaraha aaladaha ciyaarta ayaa soo bandhigay barnaamijka MSI Player App, codsi noo ogolaanaya inaan ku raaxeysano ciyaaraha Android ee OC
Tani waa sida Asphalt 9 ee Gameloft u ekaan doonto
Gameloft ayaa hadda YouTube ku daabacday fiidiyowgii ugu horreeyay ee Asphalt 9: Legends, kaas oo noqon doona beddelka Asphalt 8, oo horeyba loogu tijaabiyay Tailandai iyada oo loo marayo Play Store.
Ciyaaraha ugu wanaagsan ee ugu wanaagsan Android
Shanta Ciyaaraha Cusub ee ugu Fiican ee loogu talagalay Android - Juunyo 2018. Soo ogow xulashada ciyaartan cusub ee dhowaan uun laga helay Play Store.
Ciyaaraha ugu fiican Batman ee Android
Afarta kulan ee ugu fiican Batman ee Android. Soo hel xulashada ciyaartan oo uu jilayo nin fiidmeer ah oo ka socda Comics DC.
Ciyaaraha Android oo ay dhiirrigelisay Minecraft
4 kulan Android u waxyoonay qaabka Minecraft. Ka ogow waxbadan oo ku saabsan cayaarahan ay ku dhiiradeen qaabka ciyaarta caanka ah, gaar ahaan sawirada.
Horumarinta PUBG waxay ku dacweeyaan Ciyaaraha Epic (Fornite) khayaanada
Soosaaraha Kuuriyaanka ah ee PUBG wuxuu dacweeyay horumariye Epic Games si badheedh ah u nuqulay qaar ka mid ah waxyaabaha ciyaarta.
Ciyaaraha ugu fiican ee loo yaqaan 'Pinball games' ee loogu talagalay Android
Afarta kulan ee ciyaarta kubbadda 'pinball' ee ugu wanaagsan Android. Kala soo bax xulashadan cayaaraha ugu xiisaha badan noocyada ay dad badani hubaa inay jecel yihiin.
Ciyaaraha Sudoku ee ugu wanaagsan Android
Afarta kulan ee ugu fiican Sudoku ee loogu talagalay Android. Raadi wax badan oo ku saabsan cinwaannada ugu fiican ee ciyaarta caanka ah ee Jabbaan ee ku raaxeysanaya guusha adduunka oo dhan.
Jurassic World Alive: Pokémon GO ee dinosaurs ayaa hadda loo heli karaa Android
Jurassic World Alive hadda waa loo heli karaa Android. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan ciyaarta cusub ee taxanaha ah ee soo socda ka hor inta aan la soo bandhigin filimka cusub ee tiyaatarada la saari doono bisha Juun. Ciyaartan waxaa lagu tilmaamay Pokémon GO oo leh dinosaurs.
Legends Dragon Ball Legends ayaa hadda laga heli karaa Dukaanka Play
Waxaad hadda ka soo dejisan kartaa Halyeeyada Kubbadda Cagta Dukaanka Play Store. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan imaatinka ciyaarta caanka ah ee laga soo qaado qisada Jabbaan ilaa aaladaha Android.